Iyo ine mavara HomePod mini iri kutengeswa izvozvi! | IPhone nhau
Iyo ine mavara HomePod mini iri kutengeswa izvozvi!
Apple yakamisa sarudzo yekutenga yeiyo nyowani colored HomePod mini maminetsi mashoma apfuura muSpain uye zhinji dzenyika dzekondinendi yekare. Takatanga mangwanani ano nekuita kwekutengesa kweiyo nyowani ine ruvara HomePod mini muAustralia neNew Zealand, maawa gare gare sarudzo yekutenga yakasvika zviri pamutemo kondinendi yekare.
Saka mushure mekuratidzwa zviri pamutemo pachiitiko chaGunyana apfuura "Unleashed" uye kuvatanga kuUnited States, vanosvika kuSpain. Sarudzo yekutenga izvozvi iripo kune ese matsva emhando uye mavara, ese orenji, bhuruu uye yero ari Inowanikwa kutumirwa China inotevera, Mbudzi 25. Zviripachena izvi zvichachinja sezvo maawa anofamba nezvinodiwa.
Iwo mavara eHomePod mini ari pano!
Ivo vanonoka zvishoma asi kungotanga kweKisimusi chipo chekutyaira saka mupfungwa iyi hatigoni kunyunyuta. Zvine musoro chinhu chake chingadai chiri chekuti kuwanikwa kweava vatauri vadiki asi vane simba vane Siri yakabatanidzwa kwakatangwa kubva pakutanga pasi rese, asi kuperevedza kwezvikamu kwakatamba hunyengeri paApple.
Iyi Apple speaker yave kuwanikwa uye unogona kuwana yako nekupinda zvakananga mu webhusaiti yekambani kana kuenda nemuzvitoro zvepamutemo uchishandisa chitoro chekutora sevhisi. Hapana mubvunzo kuti inguva yakanaka yekusvika kweaya HomePod mini uye Apple pachayo uye vashandisi vane chokwadi chekukoshesa. Mutengo wemukurukuri uyu munyika yedu i99 euros.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » HomePod » Iyo ine mavara HomePod mini iri kutengeswa izvozvi!
Aqara inotangisa iyo itsva Hub G3 kamera, inoenderana neHomeKit